IKHUTSHIWE I-MARBLE SHOWER PROS KUNYE NE-CONS - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Ikhutshiwe i-Marble Shower Pros kunye ne-Cons
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwisiko lokuhlambela ngemabula kunye neengozi kubandakanya ukuba yintoni, indleko, imibuzo edumileyo kunye nendlela yokucoceka. Ngaba ucinga ukufaka ishawa yemabula kwindawo yakho yokuhlambela? Ukuba uyathanda ukubukeka okuhle kwaye uziva ngemarble kodwa ukhathazekile malunga neendleko zokusebenzisa i-marble eninzi kwigumbi lakho lokuhlambela, kuya kufuneka uthathele ingqalelo isitya semabula esimanyumnyezi.
Ishawari yemarble ekhulisiweyo ibandakanya ukubonakala kunye nokuziva kweshawa yenyani yemarble kunye neepropathi ezithile eziluncedo ezivela kwinto yokuba isitya semabhile siyinto yokwenziwa.
Kule posi, siza kujonga ngakumbi kwiisiko zemabula zemveli, ukulunga kunye nokubi, kwaye kutheni benokuthi bagqibelele iintlobo zemvula igumbi lokuhlambela
Iinkqubo eziHlaziyiweyo zeMarble Shower
Ikhutshiwe iMarble Shower Cons
Iindleko zeMarble Shower zexabiso
Ngaba iMarble eKhulisiweyo ilungile kwiShower?
Iingxaki ngeeMarble Showers
Uyicoca njani iMarble Shower
Ngaphambi kokuba singene kubuhle nakwinkxalabo yemvula emenyezelisiweyo yemarble, kuya kufuneka sijonge ngakumbi ukuba sithetha ntoni xa sisithi marble ococekileyo.
Imabula emanyeneyo luhlobo lwelitye elinobunjineli. Ilitye elinobunjineli yinto edityanisiweyo eyenziwe kwilitye lendalo elityumkileyo elixutywe nesincamathelisi, ihlala iyintsimbi yepolymer okanye isamente. Ke, imarble eyakhiwe okanye ilitye lemarmore emiselweyo.
Ilitye lobunjineli lukhetho oludumileyo lwezinto zokuhlambela ezinje ngemvula ngenxa yokuba zihlala zomelele kwaye zinganyangeki ngamanzi. Ziyakrwela kwaye zinqabile kubushushu. Kwaye ilitye lobunjineli alina porous, ngokungafaniyo nelitye lendalo.
Kuba ilitye lobunjineli alinawo amandla, kulula ukulicoca kunye nococeko kunelitye lendalo. Azifunxi izinto ezingamanzi, ngoko ke aziyi kungcolisa. Akukho ndawo phezu kwelitye lobunjineli kwiibhaktheriya, isikhunta kunye ne-mildew ukuba ikhule.
Imarble eyakhiwe lilitye lobunjineli apho ilitye lendalo lomxube ubukhulu becala lilitye lemabhile. Oku kunika imveliso egqityiweyo inkangeleko kunye nemvakalelo yemabhile yokwenyani ngelixa ikunika izibonelelo zelitye eliyinjineli.
Ukuba ujonge ukufaka ishawa yemveli yemabula kwindawo yakho yokuhlambela, kuya kufuneka ulinganise ngononophelo ubuchule kunye neengozi zokuqubha zemarble.
Ijongeka njengeMarble yangempela - Enye yezona zinto zihamba phambili kwi-marble shower pros kufuneka ibe yinto yokuba, ngelixa libukeka lihle kwaye lihle njenge-marble yangempela, ixhaphake kwaye ihlala ixesha elide.
Uninzi lweemarble ezenziweyo lwenziwe ukuba lubonakale njengemabhile yokwenyani kodwa, ngokuxhomekeke kumenzi, banokongeza imibala eyahlukileyo yokwenza imibala emihle kunye nemibala engafumaneki kwimarble yendalo.
Ngentando -Ayisiwo umbala wemarmore okhulileyo onokwenziwa ngokwezifiso, kodwa ikwanjalo ubukhulu beeshawa neemilo. Imabhile emanyeneyo ilungiselelwe ekubunjweni kwaye ungachaza ubume kunye nobungakanani obufunayo kwimveliso egqityiweyo.
Kulula kakhulu ukwenza ngokwezifiso ubungakanani, imilo, kunye nokujongwa kweshawari yemarble ekhulisiweyo kunemarble okanye ishawa yelitye yendalo njengoko iziqwenga zibunjiwe. Ukubumba ilitye lendalo, uhlala usika okanye ukrola ilitye, elinzima kwaye elinzima kakhulu.
Kulula ukuyifaka Njengoko i-marble ekhulisiweyo yenziwe kwi-molds kwaye ilula kune-marble ecocekileyo, kulula ukuyifaka. Ixabiso lokufaka elisezantsi lemarble elicwangcisiweyo liyakuhlisa iindleko zeshawari yakho.
Ihlala ixesha elide Imabhile emanyeneyo ikomelele ngakumbi kunelitye lendalo, ngenxa yoko mancinci amathuba okuba uthathwe okanye wonakaliswe. Imarble eyakhiwe ayifuni ukuba itywinwe, ngokungafaniyo nelitye lendalo okanye eliyinyani Uyilo lwemarble shawa . Njengokuba ingumhlaba ongenayo intywenka, ayizukufunxa ulwelo kwaye ayanyangeki.
Kulula ukucoceka -Ungacoca ngokulula isitya semabhile esenziwe ngamatye. Konke okufuneka ukwenze kukusula umphezulu wamanzi emabula emarble ngamathuba athile. Akukho sidingo sokuthenga isicoci esikhethekileyo kwimarble yakho yeshawari. Ungasebenzisa nasiphi na isicoci sendlu esingagungqiyo kunye nelaphu elithambileyo ukucoca umphezulu weshawa yakho.
Ngeli xesha, ukuba ucinga ukuba umphezulu ujongeka ungathandeki, unokuzilawula ngokwakho. Sebenzisa ngokulula ilaphu elithambileyo kunye nepolishi yemoto ukuze ukhanyise kwaye ukhanyise umphezulu ngokwakho.
Xa uthatha isigqibo sokufaka ishawari yemarble ekhayeni lakho, kuya kufuneka ujonge yonke inkcubeko yemarble yeshawari.
Ayizizo zonke iiMarble eziCwangcisiweyo eziMgangatho oPhakamileyo - Okokuqala, ukuba ufaka isitya semabula esimanyeneyo kwigumbi lakho lokuhlambela, kufuneka uqiniseke ukuba loo nto ikumgangatho olungileyo. Imabula emanyeneyo yinto yokwenziwa, okuthetha ukuba kunokubakho imiba esemgangathweni kunye nemveliso kuxhomekeke ekubeni uyithenga kubani kwaye phi.
Sukuthenga iemarble ezicwangcisiweyo kumboneleli wakho wokuqala owufumanayo. Cela ukubona iisampulu zezinto abanazo kwaye ujonge naziphi na iziphene. Kuya kufuneka uthengise ujonge enye into ekhoyo kunye nabanye ababoneleli kwindawo yakho ngaphambi kokwenza isigqibo sokugqibela.
Uninzi lweemveliso zemarble ezicwangcisiweyo ziza newaranti, ke qiniseka ukuba ujonga iimeko ngaphambi kokwenza isigqibo. Abavelisi beemarble abaziwayo baya kunika iwaranti kwimveliso yabo, ke leyo yenye yeendlela zokuqinisekisa ukuba imarble enenkcubeko ojonge ngayo ikumgangatho olungileyo kwaye iya kuhlala ixesha elide.
Iimfuno zokuPolishwa Njengoko sibonile kwipro's marble shower pro's, ungayipolisha imarble shawa yokugcina inkcubeko yayo. Ngelixa kungumsebenzi olula, ungadingi zixhobo zikhethekileyo, abanye abantu banokungabi nalo ixesha okanye utyekelo lokucoca ishawa rhoqo kwaye oku kunokuba yinto yokudibanisa.
Unokukrwitshwa - Kuya kufuneka ulumke malunga nezinto ococekileyo ozisebenzisayo xa ucoca isitya sakho semarble. Izinto zinokukrwitshwa ukuba usebenzisa izicoci ezirhabaxa.
U-Weaker ugqityiwe kunezinye izinto Imabhile emanyeneyo ayinabushushu, kodwa ukugqitywa kwayo kungonakaliswa ngamanzi abilayo okanye ukubeka izinto ezishushu ngokuthe ngqo kumphezulu wento leyo. Lumka nje xa uphatha izinto ezishushu kwaye kuya kufuneka ukwazi ukunqanda ukonakalisa ishawa yakho yemarble.
Iindleko zokufaka isitya semabula esenziwe ngamayeza zitshiphu kakhulu kunokufaka ishawari semabhile. Ixabiso eliphakathi lokufaka ishawari yemabula ijikeleze iidola ezingama-40 ngenyawo lesikwere. I-marble shower ye-cultured ingaba malunga nesiqingatha sexabiso.
Iindleko zemarble ezikhethiweyo malunga ne-10 ukuya kwi-35 zamawaka ngeenyawo zenyawo. Ixabiso lokugqibela liya kuxhomekeka kumenzi kunye nakuphi na ukwenziwa ngokwezifiso okujongileyo, kubandakanya imibala kunye neemilo. Umzekelo unokufumana imabhile emanyeneyo Imvula yaseCorian enikezela uluhlu olubanzi lokwenza ngokwezifiso.
Xa kuziwa kwezinye iintlobo zomphezulu oqinileyo okanye imvula yamatye endalo, imarble ekhulisiweyo ihlala iyeyona ndlela ineendleko.
Ngokomcebisi weKhaya, kwi-70-square-shower shower, iindleko eziqhelekileyo zokufakelwa ziya kuba zilandelayo:
Imabula emanyeneyo : $ 700- $ 2,450
Igranite ekhulisiweyo I $ 2,950- $ 4,550
Quartz : $ 3,200- $ 7,000
I-quartz yobunjineli : $ 3,700- $ 7,200
Iindleko zinokubaluleka ngakumbi ukuba ufuna ukufaka ngaphezulu kolunye lwezi ntlobo zeeshawari ekhayeni lakho. Funda ngakumbi malunga Ukulunga kunye neengozi zemvula ze-quartz Apha.
Ngokwesiqhelo ishawa enye ebiyelweyo iyafuneka kwigumbi lokulala eliphezulu kunye namagumbi amanye amalungu osapho okanye onke amagumbi okuhlambela ekhayeni lakho, kubandakanya igumbi lokuhlambela labandwendweli.
Ngokwenyani kunokwenzeka ukuba ube neshawa yetyhubhu yemarble engaphezulu kwesinye ekhayeni lakho njengoko, xa kuthelekiswa nemabhile kunye nezinye iishawa zamatye, njengoko kuhambelana nohlahlo-lwabiwo mali.
Jonga ezi ndonga zeshawari zemarble zityebileyo Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Usenokuzibuza ngokwakho, ngaba ikhulile imarble efanelekileyo ukuhlamba? Impendulo emfutshane, ewe. Njengokuba besesitshilo, imarble eyakhiwe ngamatye ayicoci nto leyo ethetha ukuba ayizukufunxa okanye igcine amanzi.
Imabula emanyeneyo iyomisa ngokukhawuleza ngenxa yendalo yayo engabuniyo. Nakuphi na ukuchitheka okanye ulwelo olungaphezulu kunokuba lula ukuba lukhutshwe. Ikwangumbumba onganyangekiyo kukungunda nokungunda.
Kumphezulu wamatye endalo, ii-pores zibonelela ngendawo emanzi apho ukungunda nokubola kungakhula. Ekubeni i-marble ecebileyo ayinayo i-pores, i-mold kunye ne-mildew ayinandawo yokukhula.
Kwakhona, ekubeni iishawa zemarble ezicwangcisiweyo zinokufakwa kwisiqwenga esinye okanye iziqwenga ezinkulu, uya kufumana ishawa enemigca embalwa kwaye kungabikho migca ye-grout, ngokungafaniyo neethayile.
Qaphela ezi ngxaki zilandelayo ngemvula yamatye emveli:
Umgangatho ungahluka. Unokuqinisekisa ukuba ufumana uninzi lweshishini lakho lemarble elichubekileyo ngokuthenga izinto ezivela kumenzi owaziwayo. Uninzi lwabavelisi abahloniphekileyo baya kubonelela ngesiqinisekiso semarble esithengiswayo.
Imabhule emanyumnyezi akufuneki itywinwe, kodwa kungafuneka uyipolishe rhoqo ukuze igcine i-sheen yayo.
Imabula eyoluliweyo ayisiyo-scratch-proof. Ukucoca izinto ezirhabaxa kunokushiya imikrwelo kumphezulu weshawari enamatye emarmore.
Ukuba ufuna ukwenza iindleko zokufaka imarble efanelekileyo, kufuneka uqiniseke ukuba ishawa yakho yemabula ehleliyo ihlala isebenza iminyaka emininzi. Ngethamsanqa, isitya esenziwe ngemabula kulula ukuyigcina kwaye icocekile.
Ngelixa isitya sakho semarble esomileyo siyomisa ngokukhawuleza kwaye awunakukhathazeka ngamabala okanye ukungunda nokubola kokuma, kuya kuhlala kuxhamla ekucoceni rhoqo.
Inkqubo esisiseko esisiseko yokucoceka yemihla ngemihla ekufuneka uyilandele kwisitya semabula yemveli yile ilandelayo:
Thatha amanzi ashushu udibanise nesepha yokuhlamba izitya encinci. Unokusebenzisa isepha yokuhlamba impahla okanye ifestile kunye neglasi yokucoca.
Ingcebiso: Qiniseka ukuba ujonga iilebheli ngaphambi kokuthatha isigqibo sokusebenzisa isicoci kwisitya sakho semarble. Phantse naluphi na uhlobo lokucoceka kwendlu oluya kuyenza, ukuba nje ayingxami. Kuya kufuneka uphephe i-alkaline okanye i-asidi esekwe kwindawo yokucoca.
Khangela ilaphu elithambileyo elicocekileyo. Itawuli ye-microfiber lukhetho olufanelekileyo lokucoca ishawari yemarble. Dipha ilaphu elicocekileyo kumxube wakho wokucoca.
Ingcebiso: Kunqande ukucoca okanye ukukhuhla iipads kuba zinokukrwela umphezulu, zonakalise ishawa yakho.
Sula umphezulu weshawa yakho. Yiyeke yome.
Ingxaki enye phantse yonke imvula, nokuba yeyiphi na into enayo, yile yokuba isepha scum inokwakha kwindawo yabo. Ukulwa nale nto, kuya kufuneka ngamanye amaxesha utshintshe indlela ococeka ngayo xa uhlamba.
Endaweni yelaphu elithambileyo kunye nokucoca, kuya kufuneka ngamanye amaxesha ucoce ishawa yakho ngesisombululo esingamanzi esisebenza ukunyibilikisa isepha.
Hlanganisa isisombululo se-50 yepesenti yeviniga kunye neepesenti ezingama-50 zamanzi kwaye uyibeke kwibhotile yokutshiza.
Phalaza umxube kumphezulu wesitayile sakho semarble.
Sula isisombululo samanzi ngelaphu elithambileyo uze uhlambe indawo leyo.
Thatha elinye ilaphu elicocekileyo elicocekileyo kwaye ulugcobe umphezulu ude wome.
Ukuba uhlala kwindawo apho unamanzi anzima, unokuba neengxaki zamanzi ezinokuphazamisa umphezulu wamanzi akho emarble. Amabala amanzi kwishawari yakho abangelwa kukwakhiwa kwezimbiwa.
Ukujongana namabala amdaka eshaweni sakho, ungasebenzisa iviniga kunye nesisombululo samanzi osisebenzisele isepha. Phalaza isisombululo phezu kwamanzi amdaka kwisitya sakho semarble. Vumela isisombululo sihlale malunga nemizuzu engama-30.
Emva kokuba kudlule imizuzu engama-30, lelo xesha kuphela ekufuneka usule ngalo ndawo. Thatha ilaphu elicocekileyo elicocekileyo, ulithobe, emva koko usule umphezulu. Ufuna ukuqinisekisa ukuba uyomisa kwaye ususe isisombululo samanzi.
Nje ukuba isisombululo sisuswe, kuya kufuneka ufumanise ukuba ibala lamanzi lisusiwe ngokunjalo. Ukuba ibala lihleli, kuya kufuneka uyiphinde le nkqubo amatyeli aliqela.
Njengoko siphawulile, unako kwaye kufuneka uthathe ixesha lokucoca ishawari yemarble yakho emva kokucoca. Konke okufuneka ukwenze kukusebenzisa i-wax yemoto kumphezulu weshawa yakho.
Kuxhomekeke kuhlobo lwe-wax yeemoto oyisebenzisayo, kuya kufuneka ushiye i-wax ihleli kwinkonzo ixesha elithile. Ileyibhile kufuneka ibe nemiyalelo malunga noku.
Xa ixesha liphelile, thatha ilaphu elimanzi elicocekileyo kumphezulu kwaye ususe i-wax. Fumana ilaphu lesibini elicocekileyo kwaye ulisebenzise ukuze ubambe umphezulu. Oku kufuneka kubuyisele ukukhanya kwantlandlolo kunye nokuhomba kwesitayile sakho semarble.
Ngokungafaniyo nokucoca, ipolishi akufuneki ibe yinto ekufuneka uyenzile rhoqo. Unokwenza ukuba ibe yinxalenye yesiqhelo, mhlawumbi kube kanye ngeveki okanye kube kabini, okanye uyidlale ngendlebe. Ukuba ucinga ukuba umphezulu webala lakho lemarble sha ukhangeleka ubuthuntu, khupha ipolishi, kungenjalo, yishiye yodwa.
Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela igalari yethu Uyilo lokuhlamba ngaphakathi .
imifanekiso yebhodi esekwe kwimifanekiso
isimemo somtshato sokubiza umtshakazi nomyeni
Ukutshintshiselana ngesipho somtshakazi nomyeni
Isoftware yoyilo lwekhabinethi yasekhitshini